Rafitra fanodinana ny tontolo iainana - Ellicott Dredges
Zava-dehibe ny fitehirizana ny tany voajanahary, ny moron-dranomasina, ary ny lemaka. Ny fanalefahana ny tontolo iainana dia afaka manala ny sediment voaloto ao anaty rano ambanin'ny rano.
Ny fanatsarana ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fanamorana dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny olombelona sy ny manodidina. Ny fanamorana ny tontolo iainana dia mitaky famandrihana avo lenta mba hahazoana antoka ny tanjon'ny tetikasa mandritra ny fihazonana tontolo iainana azo antoka.
Famerenana amin'ny laoniny Marsh sy Wetland
Ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny Marsh sy Wetland dia mahasoa amin'ny fialam-boly eo an-toerana sy ny toeram-ponenan'ny bibidia voajanahary. Ny fikorianan'ny rivo-doza sy ny rivo-piainana dia mihena ny fantsona manome rano madio mankany amin'ny lemaka any anaty tany na dobo. Ny famafazana ireny fantsona ireny dia ahafahan'ny rano mivezivezy sy miditra amin'ny toerana iray any an-tanety, mitondra otrikaina sy mamoaka fako.
Ny fitaovana fanamboarana dingan-dranomasina dia ampiasaina ho an'ny rindranasa lemaka be dia be ao anatin'izany ny famerenan'ny faritra be, ny fanamaintaana maina amin'ny famoronana tany, ny fanesorana ny zavamaniry ary ny fanesorana ny poizina izay manome otrikaina any amin'ny lemaka. Ny dredges an'ny Ellicott® Swinging Ladder Series dia tsara ho an'ny tetik'asa famerenana amin'ny tanety ary manome safidy amin'ny mpifidy sy ny masoivoho governemanta hisafidy rehefa miatrika tontolo mando maloto izay mitaky fasana.
Ianaro bebe kokoa momba ny fanodinana famerenenan'i Wetland sy Marsh.
Fiarovana ny morontsiraka
Ny fiarovana ny morontsiraka dia ahafahana misoroka ny tondra-drano sy ny fitrangan'ny tany. Ity karazana fiarovana ity matetika dia misy torolàlana mahavelona sy kianja fananganana, ny hetsika roa dia mitaky ny hamerenana sy ny fitaterana fasika be. Ny fiantraikan'ny fiakaran'ny ranomasina maneran-tany dia mampitombo ny fahatsiarovan-tena mikasika ny fizotran'ny ranomasina any amin'ny natiora.
Ny toetr'andro toetrandro izay tsy nampoizina tsy nampoizina dia nisy fiantraikany lehibe tamin'ny faritra izay marefo voajanahary noho ny fihoranana sy ny tondradrano. Ireo toe-javatra ireo dia nahatonga ny fahatsapana maika ny hananganana faritany amoron-tsambo izay misy tetikasa midadasika toy ny Fuller Street Beach any Edgartown, Massachusetts (USA).
Ny fanavaozana tsy tapaka mihetsika amin'ny moron-dranomasina sy fanatsarana ny morontsiraka dia lasa mahazatra hatrany amin'ny ankapobeny. Ireo tetik'asa rehetra ireo dia natao miaraka amin'ny paikadim-pandotoana izay natao mba hiarovana ny fotodrafitrasa sy ny olombelona manoloana ny fandrahonana miakatra ny haavon'ny ranomasina sy ny tondra-drano. Ellicott Dredges dia misy karazana dredge maro izay natao manokana ho an'ireo tetikasa mifandray amin'ny fiarovana ny morontsiraka.
Enbridge fonosana ny famoahana ny reniranon'i Kalamazoo amin'ny fitrandrahana solika sy famerenana amin'ny laoniny
Ahoana ny fomba hivoahana amin'ny Muck
Ny Drlicge marika Ellicott® dia mitarika ny Hoalan'i Mexico any amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny BP Spill Recovery any Louisiana
Fantsona feno rano mameno poakaty Geotextile Fantsona any amin'ny Nosy San Antonio